Wiil Soomaali ah oo lagu toogtay magaalada Ottawa ee dalka Canada – STAR FM SOMALIA
Wiil Soomaali ah oo lagu toogtay magaalada Ottawa ee dalka Canada
Kooxo hubeesan ayaa magaalada Ottawa ee xarunta Gobolka Ontario , waxa ay ku dileen Wiil Soomaali Canadian ah oo lagu magacaabi jiray Nuuradiin Hassan.
Dilka Wiilkan Soomaaliga ah ayaa habeen hore waxa uu ka dhacay banaanka hore Iskuul wax lagu barto, waxaana goobtaasi ka baxsaday kooxihii hubeesnaa ee dilka u geestay Muwaadinkan Soomaaliyeed.
Ciidamada booliiska magaalada Ottawa ayaa wada baaritaano ku aadan cidii ka dambeesay dilka loo geestay Nuurdiin Hassan , walina lama shaacin in falkaasi dilka ah dad loo soo qabtay.
Booliiska magaalada Ottawa ayaa sheegay in ay aqoon u leeyihiin Wiilkan Soomaaliga ah ee la dilay, waxa ay tilmamaeen in ninkan horey usoo maray xabsi 19-bilood ah kadib markii lagu helay fal dambiyed.
Dalka Canada , ayaa mudooyinkii dambe waxaa kusoo kordhayya dilalka loo geesto dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaana dilalka qaarkood la sheegaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay dhaxdooda isku geestaan.
Dagaal u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo Al-Shabaab oo ka dhacay Galgaduud
War Deg Deg Ah Dagaal xoogan oo u dhaxeeya Ciidamada Dowlada iyo Al-Shabaab oo ka socdo sh/dhexe